Torolàlana fampiasana | Efitrano fahatsiarovana an'i Ryuko
Misy tehezan-tendrombohitra iray amin'ny sisin'ny tohatra eo am-baravarana, misy trano fidiovana marobe, misy ny fanofana seza misy kodiarana, ary apetraka ny AED.
Ny saram-pidirana dia avela hampiasaina ho anisan'ny fanabeazana any an-tsekoly
Maimaimpoana ny mpianatra ambaratonga voalohany sy ny ambaratonga faharoa ary ny mpitarika azy ireo, ary ny mpianatra amin'ny lisea sy ny mpitarika azy ireo dia ekena amin'ny vidiny 100 yen.
Azafady mifandraisa aminay satria mila mampihatra mialoha ianao.
Maimaimpoana ho an'ny olona mihoatra ny 65 taona (porofo ilaina)
Satria ny olona 65 taona no ho miakatra (ilaina ny fanamarinana) dia tsy andoavam-bola, dia mihamaro ny olona tonga ao amin'ny tranombakoka mba hanao fialam-boly isan'andro.Amin'izay dia afaka miditra maimaim-poana amin'ny tranombakoka ihany koa ireo mpikarakara.Mifandraisa aminay mialoha, azafady.
Ho fanampin'izany, izahay koa dia manaiky famandrihana vondrona
Ny saran'ny vondrona (olona 20 na mihoatra) dia 160 yen ho an'ny olon-dehibe. Maimaimpoana ny fidirana ho an'ny olona mihoatra ny 65 taona amin'ny alàlan'ny fanolorana mari-pankasitrahana isan-karazany.Ho fanampin'izay, raha ny famandrihana vondrona dia afaka manome torolàlana zaridaina sy fanazavana tsotra momba ny asa ho an'ny vondrona nanao ny famandrihana izahay, koa azafady mifandraisa anay mialoha.